दमक नगरपालिकामा समयमा कति कर्मचारी आउछन् ? सहजै यसरी थाहा हुने – Sawal Nepal ||The Power of Information
दमक । दमक नगरपालिकामा अब कर्मचारीहरुले परम्परागत हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी गर्न नपाइने र आएर राखिएको डिभाइसमा अनुहार देखाउन साथ हाजिरी हुने ब्यवस्था मिलाईएको बताईएको छ । इ–हाजिरी नै भएपनि पछिल्लो पटक राखिएको डिभाइस बहुउपयोगी रहेको र यसबाट कर्मचारीहरुलाइ समेत धेरै सहज हुने बताइन्छ ।
दमक नगरपालिकाका आइटी अफिसर समिप चुडालका अनुसार बायो मेट्रिक डिभाइस मार्फत तत्कालै कार्यालयमा को को आए ? को को आएका छैनन् ? कतिजनामा बिदामा छन् ? कतिजना काजमा छन् ? सबै जानकारी सहजै पाउन सकिन्छ । कसैले सोध्नु र इ हाजिरीको रेकर्ड खोज्नु पर्दैन ।
कार्यालय प्रमुख वा अख्तियारप्राप्त जो सुकै ब्याक्तिले पनि आफ्नो कम्यूटरमा हेर्न सक्ने भएकाले यो धेरै उपयोगी हुने चुडालले बताउनु भयो । यो स्थानीय रुपमामात्र नभएर मन्त्रालयसम्म समेत थाहा हुने पनि उहाँको भनाइ छ । यसबाट स्वयं कर्मचारीले पनि आफु हाजिरी भए नभएको र कति पटकसम्म हाजिरी भएको हेर्न सकिन्छ, चुडालले भन्नुभयो ।
आफु बसेको कम्यूटरबाट नै बिदा तथा काजका लागि पत्र पठाउन सक्ने र त्यो स्वीकृत भए नभएको समेत थाहा पाउने चुडालले बताउनु भयो । शुरुवातमा कर्मचारीहरुलाइ अप्ठेरो लागेपनि यो बहुउपयोगी बन्छ, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालय समयमा कति कर्मचारी आइपुगकोछन् र कति आएका छैनन् भनेर मन्त्रालयसम्म थाहा हुने भएकाले अनुगमनमा समेत प्रभावकारी बन्ने बताइन्छ ।
वडा कार्यालय पनि यहिबाट अनुगमन
यसैगरी दमक नगरपालिकाका ८ वटा वाड कार्यालयहरु अहिले आफ्नै वाडमा गएकाले त्यहाँको कर्मचारी उपस्थिति पनि यहिबाट हेर्न सकिने बताईएको छ । दरबन्दि अनुसार सबै कर्मचारीको विवरण हुने भएकाले त्यहाँ हाजिरी भएको, बिदामा रहेको र अनुपस्थित भएको नगरपालिकाबाट हेर्न सकिने भएकाले यसले कर्मचारीहरु समयमा कार्यालय आउने बानि बिकास हुने बताइन्छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार समय अनुसार आधुनिक प्रविधि र प्रणालीको उच्चतम प्रयोग तथा कागजको प्रयोग सकेसम्म नगर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ । कर्मचारीहरुलाइ कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउनका लागि पनि यो आवश्यक देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । हामी प्रविधिको प्रयोगलाइ बढवा दिदै सबै काम कम्यूटर प्रणालीबाट होस भन्ने चाहान्छौ, उहाँले भन्नुभयो ।